Iibinta codsiyada iPhone | Wararka IPhone
Waan ognahay inay jiraan codsiyo iyo ciyaaro badan oo iPhone-ka ah oo aad rabto laakiin aadan iibsanin qiimaheeda oo sarreeya awgood. Actualidad iPhone-ka waxaan maalin walba kuugu soo qaadanaa a soo uruurinta codsiyada iyo ciyaaraha ugu fiican ee hoos loo dhigay on App Store. Ha seegin fursadda inaad ku soo dejiso dalab la bixiyay qiimo jaban ama xitaa gebi ahaanba bilaash ah. Maaddaama dalabyada ay yihiin kuwa ku-meel-gaar ah oo aan sida caadiga ah soconayn wax ka badan dhowr saacadood, waa inaad booqataa dalabyada iyo qiimo dhimista maalin kasta in laga wargeliyo.
by Ignacio Sala samee Bilaha 7 .
Toddobaadyo ka hor ayaannu kugula socodsiinnay kor u qaadista ay Amazon u fidineysay labada ra'iisul wasaare iyo ...
Ka hel 5 bilood oo bilaash ah Apple Music iyada oo loo marayo Shazam
by Ignacio Sala samee Bilaha 8 .
Markii ay Apple bilawday ballanqaadkeeda ah inay soo dejiso muusikada 2015, waxay siisay dhammaan isticmaaleyaasha 3 bilood oo ...
Sonos wuxuu ku darayaa qiimo dhimis PlayBars ilaa 150 euro ah
by Jordi Gimenez samee Sannadka 1 .
Shirkaddu waxay ku dhawaaqeysaa qiimo dhimista PlayBar ee 150 euro qaar badanna durba waxay ka fikirayaan cusbooneysiin suurtagal ah. Dhowr kahor…
Ilbaxnimada VI waxay u timaadaa iPhone-ka waxayna ugu dabaaldegtaa qiimo dhimis casiir leh
by Miguel Hernández samee 3 sano .
Marar badan waxaan la yaabnaa sababta cayaaraha qaarkood aan loogu sii deynin iPad-ka iyo iPhone si ay nooga dhigaan ...
Apple-ka USB C ilaa hillaaca xarigga ayaa hoos u dhigaya qiimaha
by Jordi Gimenez samee 3 sano .
Fiilooyinka USB C iyo Xidhiidhiyayaasha ayaa jiray muddo dheer Apple-na waxay ku bilaabatay hirgelinteeda imaatinka ...
Saddex kulan oo lagu raaxeysto buundadan shirkadda
Maanta waxay umuuqataa maalin jimce ah, laakiin maahan. Waa maalin aad uga wanaagsan maxaa yeelay waxay ka horreysaa dhammaadka ...
Madadaalo, sawir iyo wax soo saar, heshiisyadii maanta ee App Store
Toddobaadka dhammaadkiisu wuu bilaabmayaa sidaas darteed, waa wakhti fiican oo lagu soo dejisan karo qaar ka mid ah ciyaaraha cusub iyo codsiyada ...
SkySafari iyo NoLocation, waa laba barnaamij oo waa weyn oo iib ah hadda oo keliya
Waxaan ku sii wadeynaa iPhone News raadinta iyo ku tusida qaar, kaliya qaar ka mid ah dalabyada ugu fiican iyo dallacsiinta laga heli karo App Store. Y…
Panorama 360, Super Mario Run iyo ciyaaro kale iyo barnaamijyo la soo bandhigayo
Bixinta iyo dallacsiinta ku jirta App Store weligeed ma joojin doonaan inay muuqdaan. Macno malahan hadii ay tahay dhamaadka usbuuca, ama ...
Keyboard-ka Mini Calculator, Block vs Block iyo ciyaaro iyo barnaamijyo kale oo bilaash ah hadda
Maxaa loola dhaqmaa! Waxaan ku dhownahay inaan ku taabno dhammaadka usbuuca farahayaga. Ma aqaano waxa niyadaada ku jira ...
2 ciyaarood oo iib ah iib ah oo ku soo jiidan doona
Waxaan u nimid Khamiista anoo aad u faraxsan, oo xiisaynaya inaan qabanno dhammaadka usbuuca, iyo dalabyo iyo dallacsiinno cusub ...